Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 29, 2016 -
1 thought on “Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 29, 2016”
Qeerroo/Oromo jabadha!!! Be tough/Bold, stay focused, fight back, defend and attack or attack and defend.
Barefaamaa Oromo Qalebafadhu jedhu irratii,
1. Mataa duree irratii gorsa oromo dhaf kenudhaf akkaa namaa oromo hundaa iraa challaa bekkaa off fakkessaa,
2. Wayee hidhaanoo irraatiii ummaanii oromo akka bekkamuttii meshaa dhaf hara motii, meshaa qabateefif olaantumaan ykn oftuluumaan kan ittii dhagahamu motii, malliff meshaa yoom akka ittii fayaadamun, yommiiff akkaa olekawatuu wan bekuf.
3. Ummaanii Oromoo meshaa wan hundumaaf hin kasuu, yoom akkaa kaasuu siirriittii enyuu callaa bekkaa, kanaf ammaa yoo meshaa kafaatee yeeroo kaffatutu amaa jechuudhaa, kana immoo umaatumaa oromo callaa namuu bakkuu hin danda’uu, kanaf goressii dubiifaamee firee wan qabuu natii hin faakktu.
4. Umaanii Oromo waraa Amaraa lalee; Umaanii Oromo meshaa hidhaachudhafiis, ittii fayaadamudhafiss enyuu hin illaaluu mataa issaatiin wan godhu danda’uf, kan biraatiifu Oromotu lolaa baresisee, kanaf assii irratiiss wan siirr hin fakkatuu bareefaamiin dhihaatee.
5. Oromo wal Irraatii; galetuu yoo tatee malee Oromon wal irrattii meshaa kassee hin beekuu kasuu dhafiis fedhii hin qabuu. Wal irraa dinaa ittiisudhaf meshaa kan qabatuu. Kanaf bareefamiin “Oromo Qalebefadhu” jedhuu wan gadii fagenyaan xixlaamee bareffaamee hin fakkatuu, Radion Qeerroo kuniss siriitii tikfaamuu wan qabeduu fakkaataa.